'यहाँ बिमारीकाे कारणले भन्दा पनि समाजको हेलाले मर्न बाध्य गराउँछ' | My News Nepal
विश्वमै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आजको दिनसम्म २ करोड ३३ लाख भन्दा बढी संक्रमित भइसकेको अवस्था छ भने ८ लाख भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
विश्वभर फैलिएको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । रोग, महामारी भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा रहेर सामना गर्ने भने स्वास्थ्यकर्मीनै हुन् भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
नेपालमा पनि पछिल्ला दिनहरुमा स्वास्थ्यकर्मीका साथै सुरक्षाकर्मीहरुमा धेरै संक्रमण देखिएको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसैबीच संक्रमितको तथ्यांकसँगै स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग गरिएका केही व्यवहारले मन खिन्न बनाएको छ ।
म पनि एक स्वास्थ्यकर्मी भएको नाताले र पछिल्ला दिनमा अत्याधिक रुपमा फैलिइरहेको राजधानीकै एक अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी भएका नाताले राजधानी जस्तो सुविधासम्पन्न र शिक्षित मानिसहरुको केन्द्र रहेको ठाउँमै घटेका केही घटनाहरुबाट विक्षिप्त महसुस भएको छ ।
कोरोना संक्रमितसँग सबैभन्दा नजिक रहेर उनीहरुकै उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेका हामी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हेयको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । कुनै पनि डाक्टरलाई आफ्नो भन्दा धेरै बिरामीको चिन्ता हुन्छ, फलस्वरुप अहिलेको अवस्थामा राजधानीका स्वास्थ्यकर्मीहरु १८ घन्टासम्म सेवामा खटिइरहेका छन् । आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा राखेर बिरामीको हेरचाहमा दिन रात खटिँदा समाजका प्रतिष्ठीत एवं आफूलाई शिक्षित भन्ने व्यक्तिहरुबाटै नै गाली, गलौच एवं हेयको दृष्टिले हेरिनु पक्कै पनि सही होइन होला ।
यी र यस्ता घटना देख्दा म आफूँ स्वयंलाई पनि के स्वास्थ्यकर्मी हुनु अभिशाप हो ? र भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा विश्व ठप्प छ, कोभिड–१९ का कारण ।अहिले हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकमा महामारी फैलियो भने स्थिती झन् भयावह आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी आफ्नो परिवार नभनी आफ्नो ज्यानको पर्वाह नगरी देश र जनताको लागी अग्रस्थानमा रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ र कोही कसैको कोभिड–१९ बाट ज्यान नजाओस् भनि चिन्तित रहने स्वास्थ्यकर्मी अझ अग्रस्थानमा रहेर काम गरिरहँदा कोही स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा किन हेला गर्नुहुन्छ ? उनीहरुले १८ घन्टाको ड्युटीपछिको समय बिताउनका लागि बसेकै ठाउँमा रहेका बेला किन हेला गर्नुहुन्छ ? किन आक्रमण गर्नुहुन्छ ?
तपाईंहरुलाई थाहा छ, एकजना स्वास्थ्यकर्मीले कति जनाको ज्यान बचाउन सक्छ ? यो रोगको औषधी छैन भन्ने दिमागमा राख्नुस् भोली तपाईं हामी सबै यसबाट संक्रमित हुन सक्छौं । यो समय तपाई के गर्नु हुन्छ ? इटाली जस्तो विश्वकै सबैभन्दा स्वास्थ्य सुविधासम्पन्न मुलुकमा त संक्रमणबाट लाखौं संक्रमित हुनु र ३५ हजार भन्दा बढी मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्यसुविधा त्यति राम्रो छैन ।
अहिलेको यस परिवेशमा हामीले कोरोनाबाट विजयी पाउने भनेको आफैंले ध्यान दिएर, सचेत भएर सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गर्नु नै एकमात्र उत्तम विकल्प हो ।
त्यसैलै हामीले यहाँ स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र होइन, बिरामीलाई पनि हेयको दृष्टिले हेरिनु हुँदैन । यस रोगको सबैभन्दा ठूलो औषधी भनेको मनोबल र समाज अनि परिवारको सहानुभूति नै हो । त्यसैले बिरामीलाई हेला नगरौं । यहाँ बिमारीले भन्दापनि समाजको हेलाले मर्न बाध्य गराउँछ । यो परिस्थिति सबैको आउने छ, त्यसैले कसैलाई हेला नगरौं ।
सबैलाई माया गर्नुस् हौसला दिनुस् कोही नआत्तिनुहोस् । सुरक्षित रहनुहोस् सामाजिक दूरी कायम राख्नुस् । बेला–बेलामा साबुनपानीले हात धुनुहोस् । यस समाजमा संक्रमित व्यक्ति कोही छन् भने हौसला दिनुस् हामी सबै मिलेर यो रोगलाई पराजित गरेर हामी सबै मानवले यो रोगलाई जिती विजय मनाउनु छ।